Hooyo Somaliyeed iyo Dowlada Norway oo Mar kale Dacwad ku dhexmareyso Maxkamada Yurub | Malinnews.com
Hooyo Somaliyeed iyo Dowlada Norway oo Mar kale Dacwad ku dhexmareyso Maxkamada Yurub
Hooyo Somaliyed iyo Dowlada Norway qeybteeda qaabilsan Xanaanada Caruurta ayaa mar kale waxay dacwad ku dhex-mareysaa Maxkamada sare ee Yurub.
Kiiskan ayaa quseeya wiil ay dhashay gabar soomaali ah oo Norway ku timid qoxooti ahaan. Wiilkan, oo ku dhashay Kenya sanadkii 2009, waxaa la geeyay guri lagu xanaaneeyo dabayaaqadii 2010, markii dambena waxaa loo geeyay Qoys Kristan ah.
Bishii Diisambar 2019, hooyada waxaa lagu taageeray cabashadeeda oo ah in mas’uuliyiinta Norway ay ku xadgudbeen xuquuqda nolosha gaarka ah iyo tan qoyska, taasoo ku xusan qodobka 8aad ee heshiiska Yurub ee xuquuqda aadanaha.
Halkan waxa kale oo ay ahayd qodob in wiilka lagu meeleeyay qoys kiristaan ​​ah, halka hooyadu tahay muslimad oo ay dooneysay in lagu koriyo diinteeda.
Haweeneyda ayaa sidoo kale weydiisatay maxkamada inay qiimeyso in lagu xadgudbay qodobka 9-aad ee xorriyadda diinta. Maxkamada Strasbourg ayaa xukuntay in qeybaha dacwada ee ku saabsan haweeneyda iyo wiilkiisa diintiisa iyo dhaqankiisa sidoo kale in lagu qiimeeyo qodobka 8-aad.
Xukunka kadib sanad uun ka hor, haweeneyda waxay codsatay in kiiska dib loogu baaro Maxkamada Yurub, oo ay maxkamada ogolaatay bishii shanaad ee sanadkii hore. Sidaa darteed, 17 garsoore ayaa ka fiirsan doona kiiska toddobaadkan.
Author: Malin News
Wararkii ugu danbeeyey ee xaaladda Muqdisho
Galmudug iyo Puntland oo heshiis kala saxiixay
Wararkii ugu Danbeeyey ee Xaalada Muqdisho
Maxay tahay xiisadda la xiriirta Faransiiska ee u dhaxeysa dowladda iyo Islaamiyiinta Pakistan?
Galmudug iyo Puntland oo Amniga Iska Kaashanaya
Soonka iyo Faa&apos;iidooyinkiisa Caafimaad